Sawirro dayax gacmeed qaaday oo muujinaya saliid ku daadatay badda Khaliijka - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ICEYE
Image caption Sawir dayax gacmeed qaaday oo muujinaa markab saliidi ka daadanayso
Shirkadda raadaarrada dayax gacmeedyada ee Finland ee magaceeda la yidhaa IC ayaa sheegtay in raadaarrada dayax gacmeedyadeedu sawireen saliid badan oo ku daadatay aaggii uu badda Khaliijka ka marayey markab saliidda qaada oo la yidhaa Amjaad 12 May marayey goobtaas oo weliba u dhaw xeebaha Imaaraadka.
Markabkaa iyo saddex kale ayaa lagu weeraray badda markii ay ka dhaqaaqeen dekedda Al-Fujayra.
Maraakiibtaa yaa weeraray?
Ilaa hadda cidina may sheegan in ay ka dambaysay weerarkaa, sidoo kalena waxaan caddayn sida wax u dhaceen.
Warar ka soo baxay baadheyaal Maraykan ah ayaa iyaguna tibaaxay in ay aaminsanyihiin in Iran ama kooxaha ay taageertaa ay waxyaabaha qarxa u adeegsadeen maraakiibtaa, hase yeeshee caddayn looma hayo in Iran ku lug leedahay.
Trump sharci gaar u adeegsaday ogolaansha hub laga iibinayo Sucuudiga
Sidaas oo ay tahay ayaan weli khubaradu xaqiijin karin mugga saliida ku daadatay badda, laakiin shirkadda Kongsburg ee dalka Norway oo iyaduna bixisa adeegyada sawirrada dayaxgacmeedyada oo arimahaa khibrad u leh ayaa iyaduna xaqiijisay in ay saliidi ku daatay badda.
Image caption Markabka Amjaad
Agaasimaha fulinta ee shirkada IC ayaa BBC-da u sheegay in muuqaalka "saliidda badda ku daadatay yahay bar madow oo badda gunteeda fadhida".
Wararku waxa kale oo ay tibaaxeen in markabka Amjaad markii wax gaadheen aanu sidin saliid qaydhiin laakiin waxa ka daatay yahay shidaalkii markabka.
Imaraadka iyo Sucuudiga ayaa hore u sheegay in ay xog aan badnayn ka heleen shilkaa dhacay 12 May.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in khasaare gaadhay Amjaad, markab kale oo Sucuudigu leeyhay, markab sitay calanka Imaaraadka iyo markab kale oo laga leeyhay dalka Norway.
Shilalkani waxay ku soo beegmeen iyada oo xiisadda gobolka ka taagani ay sii kordhayso.
Dekadda Al-Fujayra waxay ku taallaa dhanka bari ee Imaaraadka ee gacanka Cumaan oo ah halka laga galo marinka Hurmus oo saliidda Bariga Dhexe dunida looga dhoofiyaa marto.